Hira Fandrotsirotsiana Zaza Avy Amin’Izao Tontolo Izao : Iza No Ironanao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2014 16:02 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, Swahili, Català, Français, عربي, 日本語, English
Ny tantara dia avy amin'i April Peavy ho an'ny The World (izao tontolo izao) nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 7 Avrily 2014 ary navoakan'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana hifampizara votoaty.
Saingy hita fa tsy mampiala voly ny zaza ny hira fandrotsirotsiana zaza, fa manampy ny lehibe, tokoa, hoy ny fanazavan'ny mpanoratra Kathy Henderson, izay nanangona ny hira fandrotsirotsiana zaza manerana ny glaoby ho an'ny bokin'ny zanany, Hush, Baby, Hush [Mangina zaza, mangina]. Nolazainy fa manampy ny ray aman-dreny “hiatrika ny toe-draharaha rehefa lany aiky anaovan'ny zaza azy, na tsy mahavita mampatory ny zaza, na mahatsiaro tena, tena reraka aoka izany” ny hira fandrotsirotsiana zaza.
Ny lohatenin'ny bokin'i Henderson dia avy amin'ny hira Jamaikana fandrotsirotsiana zaza antsoina hoe “Hush Baby Hush” [mangina zaza o mangina] izay ahitana kinova narakitr'i The Kitchen Sisters.
Amin'ny hira Tiorka fandrotsirotsiana zaza antsoina hoe “Dandini Dan,” ny andininy iray milaza zanak'omby tafiditra ao an-jaridaina ka nandroaka azy ireo ilay tantsaha tompon'ny toerana.
Manangona sy mizara ny hira fandrotsirotsiana zaza ankafizina manerana izao tontolo izao ao amin'ny fampihatranay vaovao, The World's Lullabies ny PRI. Mihainoa ary lazao anay izay tianao. Te-hizara izay tianao? Afa-mampakatra izay narakitrao ianao na lahatsary (video) — na manindry ny bokotra fotsiny dia mihira eo amin'ny fitaovan'ny finday na solosainanao.